Soo dejisan JetAudio 8.1.4 – Vessoft
Ciyaaryahan Media, Editor Audio, Converters Video
Soo dejisan JetAudio
JetAudio – ciyaaryahan wada shaqaynta in loo maqli karo iyo ka arrinsashada maqal ah ama video ah files. Software wuxuu taageeraa qaabab loo jecel yahay, sida MP3, MP2, WAV, Mpg, AVI, MOV iwm JetAudio kuu ogolaanayaa inaad si ay u gubaan CD-yada codka oo nuqul ka kooban si ay u drive aad u adag. Software waxuu si aad u dalbato effects kala duwan si ay kuwan raadkaygay, waxa ay taageertaa .Wadashaqayntaas ee karaoke, waxaa ku jira barbaraha multiband, qaab ayna editor tag. JetAudio sidoo kale waxaa ka mid ah boggaga web caan ah oo kuu ogolaanaya in aad si aad u furato isticmaalaya browser ka dhisay-in.
Loo maqli of audio iyo video files
Processing ee files warbaahinta
JetAudio Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Video Converter Factory Pro 8.8